Ny tahan'ny trano fandraisam-bahiny ao Mosko no avo indrindra any Eropa
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny tahan'ny trano fandraisam-bahiny ao Mosko no avo indrindra any Eropa
Ny fahafahan'ny olona mivezivezy malalaka ao amin'ny firenena ary saika manala fetra feno dia namela ny tsenan'ny hotely Moskoa ho sitrana haingana kokoa noho ny renivohitra Eoropeana
Mosko no laharana voalohany tany Eropa raha ny tahan'ny tahan'ny trano fandraisam-bahiny
Tany Istanbul, izay nisondrotra ny laharana iray volana talohan'izay, dia nitontongana 37.3% ny tahan'ny trano fandraisam-bahiny.
Tamin'ny volana Desambra, ny tahan'ny trano fandraisam-bahiny ao Moskoa dia nahatratra 43.3%, izay avo 1.5 heny noho ny tao amin'ny tanàna lehibe indrindra any Torkia.
Ny trano fandraisam-bahiny Mosko dia nofenoina 39% tamin'ny Novambra 2020 izay manome ny laharana ambony eropeana renivohitra Rosia, araka ny tatitry ny orinasa mpanadihady iraisampirenena Cushman & Wakefield.
Nahazo ny laharana voalohany isam-bolana teo aloha i Istanbul Tiorkia, saingy nilatsaka ho 37.3% ny tahan'ny trano fandraisam-bahiny tamin'ny Novambra. Tamin'ny volana Desambra, ny tahan'ny trano fandraisam-bahiny ao Moskoa dia nahatratra 43.3%, izay avo 1.5 heny noho ny tao amin'ny tanàna lehibe indrindra any Torkia. Tamin'ny volana voalohany 2021, ity tarehimarika any Mosko ity dia niova saika tsy niova tamin'ny 43.6%.
Ny angon-drakitra momba ny tatitra Cushman & Wakefield momba an'i Moskoa dia nohamafisin'ireo mpanolotsaina hafa, ary koa ireo hotely. Ny solontenan'ny orinasa dia nanamarika fa mbola tsy naharesy onja COVID-19 hafa i Eropa, izay nitondra fepetra henjana amin'ny fivezivezen'ny olona sy ny fanidiana ny fotodrafitrasa, anisan'izany ny hotely.
Ny fahafahan'ny olona mivezivezy malalaka ao amin'ny firenena ary saika fanonganana tanteraka ny fameperana dia mamela ny tsenan'ny hotely Moskoa ho sitrana haingana kokoa noho ny renivohitra Eoropeana.
Na izany aza, miverina tsimoramora amin'ny tombony very ny trano fandraisam-bahiny ao Mosko noho ny fihenan'ny salan'isan'ny efitrano. Ny tahan'ny efitrano amin'ny trano fandraisam-bahiny sasany tao Moskoa dia nidina 30-40% teo aloha.
Fanambadiana ho an'ny tanjona mandritra ny COVID-19
Uniglobe dia manamarika ny tsingerintaona 40 taona miaraka amin'ny fanantenana sy ny fifantohana amin'ny ho avy